BEERTO WAXAY DHALATEY YAANYO YARYAR: SIDA LOO BEERO YAANYADA, GOORMEE AYAA KU HABBOON ARRINTAN, WAA MAXAY KHALADAADKA SUURTAGALKA AH? - BEER CAGAARAN
Qodobbada lagu beeri karo miraha abuurka ah ee yaanyada. Sidee looga fogaadaa khaladaadka suurogalka ah?
Marar badan, ee dhulka u furan, iyo in lagu koriyo, iyo weelka for geedo, growers qudaarta waxay door bidaan in ay ku beeraan ma qalalan, laakiin horey u abuuray abuurka yaanyo.
Wixii geedi socodka ah ee lagu guuleysto, waxaad u baahan tahay inaad hore u sii ogaatid oo aad soo bandhigto marxaladdeeda oo dhan, oo ah sida loo abuurayo miraha yaanyada.
Qodobkani, waxaan kuu sheegi doonnaa dhammaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee abuurka yaanyo yaryar iyo abuurkooda dambe ee carrada, oo ku siin talooyin ku saabsan sida looga hortago khaladaadka.
Iska dhalidda abuurka yaanyo
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad doorato abuurka ku habboon.. Iyadoo aan loo eegin in miraha laga iibsaday dukaanka, oo la iibsaday "gacanta" ama loo diyaariyey kaydinta si madaxbannaan, kooxo qaar ayaa noqon doona kuwo ugu waxtar badan, halka kuwo kalena ay noqon karaan boqolkiiba siyaado ah oo daciif ah iyo xitaa loogu yeero "madhan". Si tan loo hubiyo, waxaa lagu baari karaa biqilka, la noolaaday oo kalibaaray (oo lagu qiimeeyay size iyo muuqaal).
Ka dibna miraha waxaa lagu daaweeyaa: jeermi-dilid, adkeeyn iyo xoojin, ka dibna si toos ah u socodka biqilka. Tani waxaad u isticmaali kartaa maro, faashad ama, tusaale ahaan, suufka. Qaar ka mid ah beeralayda qaarkood waxay isticmaalaan suunka waraaqaha.
Caawin Seeds ee wax soo saarka warshad, oo leh midab, midab buluug ama cagaaran, ayaa hore u mariyay dhammaan tababarka lagama maarmaanka ah, mana ubaahnid shaqeyn dheeraad ah.
Meelaha qoyan ee ka hooseeya miraha waxaa la dhigaa weel balaastig ah ama daboolay polyetylen oo ka tagay qolal si fiican loo qaboojiyey dhowr maalmood, caadi ahaan 3-4. U muuqaalka caleemaha yaryar macnaheedu waa diyaar u ah abuurka beeritaanka.
Maxay taasi u dhacday?
Faafinta abuurka ma aha tallaabo qasab ah, laakiin beeraha khudradeed oo badan ayaa ku xajinaya, sababtoo ah waa mid muhiimad weyn leh:
miraha aan biqin ee tamaandhada ayaa horay loo diiday;
Nidaamka ayaa si weyn u saameeya koritaanka koritaanka: farqiga u dhaxeeya abuurka aan la daboolin wuxuu noqon karaa 2-3 maalmood ilaa 7 ama in ka badan;
miraha ugu dambeyntii wuxuu noqonayaa mid aad u adag oo suurogal ah;
geedo u muuqdaan si siman, iyo daryeelka geedo at hal mar ah ee koritaanka waa fududahay.
Qeybta biqilka marka laga beerto miraha abuuray way badan yihiin. Waxaa laga yaabaa in khasaare keli ah ee habkani yahay in ay u baahan tahay daryeel gaar ah iyo saxsanaanta.
Marka ciidda iyo abuurka la diyaariyo, miraha waxaa lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo ama weelasha geedo. Dhulku waa la kiciyaa, dabadeedna loo qoondeeyay - tani, sida caadiga ah, qoryaha buluugga ah ee dhuuban ama tusaale ahaan, taliye ayaa loo adeegsadaa.
Ka dib markii la beero, weelasha leh geedo mustaqbalka ah ayaa lagu daboolay filim aan wax-qabad lahayn, tusaale ahaan, polyetylen.
Qorsho alwaax ah ayaa lagu riixay ciidda, oo soconaya 5-10 mm oo hoos u dhaadheer: adoo samaynaya, khadadka ayaa la sameeyaa, jabinta aagga sariiraha.
Seeds waxaa lagu beeray si isku xigta fogaan ah 1 cm, inta u dhaxaysa sariiraha waa ku filan in ay sameeyaan 2.5-3 cm.
Ka dib markaa, waxa la buufiyaa oo lagu rusheeyaa ciidda lakabka 8 mm ee faaqidaan iyo 1.5 cm noocyo dheer.
Golaha Halkii sanduuqyada weelasha leh sariiro, waxaad isticmaali kartaa koobabka caaga ah, ka jar dhalooyinka caaga ah, koobabka caanaha, iwm.
Dusha ciidda wuxuu u qaybsan yahay afar geesood 4 × 4 cm.
Bartamaha oo dhan waxaa la sameeyey fasax 1.5 cm, kaas oo 3 miro lagu dhajiyo, ka dib markii lakabka la sarreeyo oo qoyan yahay iyadoo la adeegsanayo faleebo gacmeed.
Inta lagu jiro maalinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka + 20-24 ° S, habeenkii - +18 ° C. Heerkulka ugu fiican ee yaanyada waa +25 ° C.
Soo degidda ciidda
Ka hor inta aan la beeri, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo isku dar ah ciidda ama in la jebiyo ciidda, jeermisyada iyo, haddii loo baahdo, ku dar bacarimis, hubso in heerkulka gudaha ku haboon yahay geedka si ay u koraan oo aan u seexan, si loo hubiyo joogteynta iyo xaaladda carrada.
Isku darista ciidda waxaa la iibsadaa ama la sameeyaa iyada oo si madax bannaan loo xisaabinayo iyadoo la xisaabinayo qaybo siman oo caws, dhul beereed iyo humus. Haddii dhulka loo diyaariyo geedo, waxaa lagu talinayaa in lagu daro qayb ka mid ah sida balka.
Si carrada u soo jeestay ma aad u culus ee caleemaha, waxay ku darsataa ciid ah, loo shaqaaleeyey on bangiyada webiga, ee saamiga 1/5 share of wadarta.
Ma qaadan kartid dhul, kaas oo ku yaal agagaarka beeraha waraabka iyo kaydadka: waxay noqon kartaa sun. Miisaanka lakabka ee isku dar ah ee abuurka abuur waa 4-5 cm.
Marka geedo loo qorsheeyo in la quusiyo, dharka ugu sareeya ayaa lagu daraa ciidda, taas oo ay ku jiraan fosfooraska, magnesium, boron, potassium, molybdenum, manganese, copper iyo nitrogen: 1 tbsp. qaaddo bacriminta macdanta 10-12 kg ee ciidda isku dar ah.
Laba maalmood ka hor laga beerto, ciidda waa la nadiifiyaa.: Kiriimka (potassium permanganate) (potassium permanganate) waxaa lagu kala diraa biyo kulul iyo daadad.
Waqtiga ugu habboon
Waqtiga abuurka abuurka wuxuu inta badan ku xiran yahay meesha ay qorshaha korriinka si ay u koraan. Goobidda dhul furan waa in aan bilawdo bilaha bartamaha Maarso, waxaa lagu qabtaa aqalka dhirta lagu koriyo ama weelka loogu talagalay geedo laga bilaabo February 18-20 ilaa 10-15 bisha xigta. Taariiqda saxda ah ee saxda ah waa in la dhisto, sidoo kale waxa ka socda arrimo kale: darajada yaanyada, sifooyinka cimilada, xaaladaha dibadda ee beerashada.
Golaha Xaalad kasta, waa in la raaco wakhtiga soo degitaanka ee ay soo saartay soo saaraha: sida caadiga ah macluumaadkaan waxaa si toos ah loogu qorayaa boorsada miraha ama tilmaamaha la socda.
Marka labada caleemood ee hore ka muuqdaan dhulka, dhirta u baahan tahay si ay u bixiyaan iftiin ku filan. Kontaroolada leh geedo ayaa lagula talinayaa in la dhigo meel u dhow daaqada.. Haddii beeritaanka la fuliyay bishii Febraayo, labada iyaga loogu talagalay iyo aqalka dhirta lagu koriyo waa in lagu abaabulaa iftiin macmal ah.
Xaaladdan, 5 maalmood, heerkulku waa inuu ka jiraa +14 ilaa +16 ° C inta lagu jiro maalinta iyo ilaa 12 oC habeenkii, ka dibna waa in la sara kiciyaa heerka hore. Ka dib markii biqilka dhammaan beerto, dhirta waa in la quudiyo, bacriminta organic iyo macdanta macdanta ee foomka dareere ah.
Tilmaamaha ku beerista
Geedka siddeed la koray: waxaa la isku daraa dhoobo dhuleed oo lagu dhex daro weel balaastig ah (tusaale, koobab), ka dibna waxaa lagu dhejiyaa balaayadaha leh lakabka 2-3 cm oo daboolan oo buuxa oo isku dar ah kaas oo abuurka biqin. Ka dib markii la soo qaado dhirta si taxadar leh loo waraabiyo.
Haddii caleemaha geedo yihiin mugdi, iyo asliga ah waa midab yar oo guduud ah, dhirta uma baahna nafaqo hoose. Haddii kale, bacriminta waa in lagu daraa toddobo cisho ka hor inta aanad dhoofin.
Saddex maalmood ka hor laga beerto dhulalka caleemaha hoose ayaa laga saaray. Ceelasha leh qoto dheer oo 10-15 cm ah ayaa horay loo buuxiyey ciidda nafaqo leh iyo daadin leh xal auctous ee daloolka potassium dufanka dalxiisaan leh ee dufanka dheeraad ah ee jeermiska.
Waa muhiim. Masaafada u dhexeysa godadka iyo sariiraha waa siday u kala horreeyaan, 30-35 cm iyo 40-45 cm oo tamaandheyn ah, 40-45 cm iyo 50-60 cm oo kuwa sare ah, ama 60-65 cm inta udhaxaysa dhirta marka la beeray nooca feerka.
Haddii buulaynta loo qorsheeyay beeritaanka, ka dibna ku yaal laba jibbaaran 80x80 cm, 2-3 dhirta oo hoos u dhigma ama 2 dhirta noocyo dheer.
Waxaad sidoo kale abuuri kartaa abuurka aqalka dhirta lagu koriyo ama dhulka u furan si koritaanka iyo horumarka dhirta dhirta oo idil ka baxsan iyada oo aan wax tareyn. Xaaladdan oo kale, masaafada u dhexaysa godadka iyo miraha waxaa lagu hayaa 2-3 cm iyo 7-10 cm, siday u kala horreeyaan. Geedo ku jira hal buul oo waa inay ahaataa mid isku mid ah.
Khaladaadka suurtagalka ah iyo digniinta
Badeecooyinka la daabacay waxay u baahan yihiin daaweyn aad u taxadar leh: marka lafdhabarta ay waxyeello soo gaadho, biqilka ma muuqan doono. Tani waa in la xasuustaa labadaba inta lagu jiro biqilka (si loo hubiyo in xididada aan la jarin) iyo inta lagu jiro beerashada.
Inta lagu jiro soo degitaanka, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo masaafada saxda ah ee u dhaxaysa godadka iyo sariiraha. Si dhakhso ah loo beeray, dhirta waxaa laga yaabaa inaanay helin nafaqo ku filan, ogsiji iyo biyo oo daciif ah. Ama tag korniinka degdegga ah ee raadinta iftiinka si ay waxyeellada midhaha.
Haka goynin waqti hore. Waxaa lagama maarmaan ah in la sugo dhulka iyo hawada si ay u kululaan, oo barafku habeenkii ma dhicin. Haddii ay tahay mid aad u qabow, dhirta ayaa "jiifa". Dib-u-dhac kasta oo kobcin ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho tirada iyo tayada dalagga mustaqbalka.
Waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in miraha aaney ku jirin qoto dheer, laga bilaabo halka ay ka soo baxaan dhirta ay u baahanyihiin in ay kor u qaadaan ilaa sare iyo waqti adag. Waraabinta ciidda waa in la fuliyaa ka hor soo celi, si ay abuurka ma dhicin. Ka dib markaa, qoyaanka waxaa lagu hagaajin karaa adigoo daboolaya dalagga ama isticmaalaya faleereer. Waa ku filan in aan lagu aaso miraha yar yar, laakiin si fudud u daadi carrada.
Haddii ciidda aan la shubin, waxay u horseedi kartaa cudurka iyo cudurada abuur iyo dhirta.
Goobta culus, sprouts ayaa si tartiib ah u kori doona, iyo si aan fiicnayn, waxay bilaabi karaan inay koraan daciif.
Ka hor intaan la dhicin iyo ka dibba waxaa looga baahan yahay inay raacaan xaaladda carrada. Oxygen wuxuu galaa ciid ah qoyan oo qoyan, taas oo ka dhigaysa korriinka koritaanka iyo xitaa dhimashada miraha, waana ay ku adkaan doontaa inay u soo baxaan dusha sare ee qalalan iyo dabacsan. Sidoo kale, qoyaan badan ayaa sababi kara caaryo. Si looga hortago tan, ka dib marka la furo, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo hawo qaadashada hal mar ama laba jeer maalintii, siidaynta daboolka.
Haddii hadhuudhadu dhashaan ka dib waraabinta, ciidda waa in la buuxiyaa lakab ah 1-1.5 cm Si looga fogaado tan, ma aad biyo qabsan kartid, laakiin buufin.
Haddii dhirta lagu beeray dhul furan, heerkul ah +26 ° C iyo kore, filimka waa in laga duubaa dhinacyada.
Tamaandhada waa dhaqan cadaalad ah oo loogu talogalay taranka, kuwaas oo labadaba lataliye iyo kuwa bilowga ah ay ku raaxaystaan ​​farxad.